Uhlobo lweDosi yokuLawulwa ngokuchanekileyo yokuPompa iPompu kunye nePompo yeSirinji Ukusuka eSunbright
Idosi engalunganga yamayeza asetyenziswa ngabongikazi basesibhedlele ihlala ikhokelela kwiingozi ezinzulu zonyango. Ke ngoko, i-Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co, Ltd. iphehlelele impompo lokumnika isirinji, leyo impompo lokumnika i-SUN-900 kunye ne-syringe pump SUN-500 that strictl ...Funda ngokugqithisileyo »
I-Sunbright I-Grandly Iphehlelele i-Pixiu Series yeeMonitha eziMonde
Ixesha Post: Sep-27-2020
Ukubeka iliso kwisigulana kwezonyango sisixhobo okanye inkqubo elinganisa kwaye ilawule iiparameter zomzimba zesigulana, kwaye oogqirha banokuthelekisa kunye nexabiso elisetiweyo, liya kuvusa ialam xa lidlula umda. Ngokwakhiwo, ikwahlula ngokwamaqela amane ...Funda ngokugqithisileyo »
Ixesha elitsha liqala ukusuka kwi-Sunbright Decade Carnival
Isiguli esinezigulana ezininzi sisisixhobo sonyango okanye inkqubo elinganisa kwaye ilawule iiparameter zomzimba zesigulana, kwaye sinokuthelekisa nexabiso elimiselweyo, kwaye linokuthumela ialam xa idlula umda. Ngoku sinento entsha yokufika kweliso lokuphindaphinda: ...Funda ngokugqithisileyo »
Umatshini weSunbright oPhezulu woMgangatho we-ECG: Umgaqo weSicelo kunye nokuSebenza
I-ECG yitekhnoloji esebenzisa i-electrocardiograph ukurekhoda utshintsho kwimisebenzi yombane yentliziyo ngexesha lomjikelo ngamnye wentliziyo ovela kumphezulu womzimba. Iimpawu zeendlela ezahlukeneyo ezikhoyo: i-3-ijelo le-ECG, i-6-ijelo le-ECG 7 intshi yombala we-LED obonisa isikrini sokuchukumisa u-S ...Funda ngokugqithisileyo »
Inzululwazi edumileyo: Yintoni umatshini we-ultrasonic?
Nokuba kukuhlolwa kwezempilo okanye utyelelo esibhedlele, ugqirha uhlala ebuza isigulana kuvavanyo lwe-ultrasound. Uninzi lwabantu ukuqonda ngomatshini we-ultrasound lusetyenziselwa ukuvavanya abasetyhini abakhulelweyo. Ngapha koko, umatshini we-ultrasound awusetyenziswanga kuphela ukukhulelwa ...Funda ngokugqithisileyo »
Iminyaka elishumi Yekrele: Umatshini weSunbright we-Ultrasound Cinga ngakumbi kunawe
I-SUN-906A / B / C uthotho luphando oluzimeleyo kunye nemveliso yophuhliso yi-Xuzhou Sunbright Electronic Technology Co., Ltd. uvuze igama eliphezulu ...Funda ngokugqithisileyo »